नेदरल्यान्डको यौन बजारमा ग्राहक बनेर पुग्दा ...
साउन ३१, २०७७
काठमाडौंबाट टर्किस एयरबाट टर्कीको ईस्तानबुल हुँदै युरोपेली मुलुक बेल्जियम आइपुग्ने क्रममा मेरो मनमा जम्मा २ वटा चाहना प्रगाढ थिए ।
पहिलो, स्विजरल्यान्डको जेनेभादेखि जुरिकसम्म रेलमा यात्रा गर्ने । रेलको झ्यालबाट डाडाँपाखा, हिमाल, घोडा चरन गरिरहेका फाँटका मनोरम दृश्यहरू हेर्ने ।
दोस्रो, फ्रान्सको पेरिसमा रहेको आइफल टावरको टुप्पोमा पुगेर पेरिस शहरको रमझम नियाल्ने । सम्झनाका प्रतिबिम्बका लागि दूरबिनमा आँखा जोडेर १–२ तस्वीर खिच्ने ।
आफूलाई मैले निकै शौभाग्यशाली मान्नुपर्छ । किनकि मैले यी दुवै चाहनालाई पूरा गरें । निकै नजिकबाट अनुभूति गरें ।
कुनै दिन पोखरामा ट्रक देख्दा त्यसै–त्यसै रमाउने मैले स्विजरल्यान्ड र पेरिस शहर आफ्नै आँखै अगाडि देख्न पाएको थिए ।
मेरो साथमा अर्का मित्र पनि आएका थिए नेपालबाट । उनी सरकारी जागिरे थिए । उनी पनि म जस्तै घुम्नकै लागि पहिलो पटक युरोपको यात्रामा थिए ।
युरोप घुम्दा पक्कै पनि उनका पनि मेरा जस्तै चाहनाहरू थिए । तर एउटा चाहना भने फरक थियो उनको । उनलाई थाहा थियो यौनबजारका विश्वका १० वटा चर्चित देशमध्ये नेदरल्यान्ड एक हो । उनलाई नेदरल्यान्डको यौन बजार हेर्न मन लागेको रहेछ । हेर्ने मात्र होइन कि प्रयोगात्मक अनुभूति गर्ने ।
‘दिलनिशानी सर तपाईं यहाँ युरोप आइसकेपछि एक नयाँ अनुभव नलिइकन के जानु ? जाउँ हिड्नुहोस् न यसो खैरेनीहरू पाइने ठाउँतिर,’ उहाँले भन्नुभयो ।
पक्कै पनि मलाई यौन शहरबारे थाहा नहुने कुरा भएन । यसअघि थाइल्यान्डको भ्रमण गरिसकेको थिएँ । यौन बजारलाई टाढैबाट हेरेको मात्र थिएँ । पशुपतिनाथको कसम त्यस्तो नाजायज काम चाहिँ गरिनँ । म विवाहिता मान्छे कहाँ त्यस्तो गर्नु त !
थाइल्यान्ड पनि नेदरल्यान्ड जस्तै यौन व्यवसायको हबको रुपमा संसारभर स्थापित छ । वेश्यालयलाई कानूनी मान्यता नभए पनि सरकारले आंशिक नियमन गरेको छ । यहाँको पर्यटन व्यवसाय यौन पर्यटनमै निर्भर छ । थाइल्यान्डमा भेदनामी युद्धपछि यौन व्यवसाय शुरू भएको थियो ।
म यसपटक थाइल्यान्ड होइन, नेदरल्यान्डको यौन बजारमा पुग्ने चरणमा थिएँ । भनिन्छ युरोप यौनको मामिलामा उदार छ । विश्वका चर्चित यौन बजार र उपकरणहरू पनि युरोपमै छन् ।
त्यो दिन साँझ हामी बेल्जियमदेखि नेदरल्यान्डको यौन बजार नियाल्न हिँड्यौं । मेरो ध्यान धेरै अध्ययन भ्रमणको लागि मात्र थियो । कस्तो रहेछ हेरौं बुझौं भन्ने मात्र थियो । तर सरकारी जागिरे मित्रले खैरेनीसँग घटना नै घटाएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सायद उनको यो जीवनभरको लक्ष्य हुनसक्छ । जोसुकैले जे भनोस्, आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यसरी आवेग, चाहना र अनुभवका लागि हामी दोस्रो पटक नेदरल्यान्डको यात्रामा लाग्यौं । यसभन्दा अगाडि पनि नेदरल्यान्ड आएका त थियौं तर दिउँसो आमस्टरडम शहर घुम्नका लागि आएका थियौं । यसपटक भने रातको यात्रा थियो । उद्देश्य थियो, यौन बजारको भ्रमण ।
हामीलाई १ जना दाइ र केही सहयोगी मनहरूले त्यो यौन बजारसम्म पुर्‍याउने जिम्मा लिएका थिए । १ जना महिला पनि हुनुहुन्थ्यो साथमा । उहाँले यस्ता कुरालाई सामान्य लिन बारम्बार अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो । आज संस्मरण लेखनबाट उहाँहरूलाई धेरै–धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
गाडी चलाइरहेका दाइले अचानक भन्नुभयो, ‘परार साल त्यो कलाकारलाई लगेर गएको मान्छे त २ घण्टासम्म पनि निस्किँदैन यार । खल्तीमा ५०० युरो बोकेका थिए, त्यो सबै चट पारेछन् ।’ त्यो कलाकारको नाम के हो थाहा भएन । तर चर्चित लोक दोहोरी गायक हुन् भन्ने कुरा बुझियो ।
सँगै यात्रामा रहेका अर्का दाईले भन्नुभयो, ‘अनि पोहोर साल होइन त के मन्त्री आउदाँ गएको । त्यो मन्त्री त अलमल पो परेछन् । कहाँबाट जाने हो भित्र भन्नुभयो, सबै देखाइदिए । जे होस् उहाँ त ३० मिनेटमै निस्किनुभयो । स्याँस्याँ र फ्याँफ्याँ गर्दै आउनुभएको थियो ।’
त्यो मन्त्रीको नाम पनि याद भएन । तर कांग्रेसको सरकारको पालाको कुरा रहेछ । मन्त्री काँग्रेसका थिए कि तत्कालीन माओवादीको थाहा भएन । तर मन्त्रीजी पनि यौन बजारको दर्शन गर्न पुगेका रहेछन् ।
हाँसो मजाक गर्दै त्यो दाइले थप्नुभयो, ‘यो दिलनिशानी भाइ सधै यार्सागुम्बाको कुरा गर्छ, मार्ने भयो ब्रदरले आज ।’ उहाँको यस्तो कुराले गलल हाँसोको भूकम्प नै आयो ।
‘कहाँ यार दाइ त्यस्तो कुरो, हैट ! म त जस्ट अनुभव गर्नका लागि मात्र हो । हेर्ने मात्र हो बाहिरबाट भित्र जान्न । कस्सम जान्न,’ मैले भने ।
गफ गर्दागर्दै हामी नेदरल्यान्डको यौन बजार आइपुग्यौं । गाडी पार्क गर्ने काम भयो । उहाँहरूले भन्नुभयो, ‘हामी तपाईंहरूलाई यहाँ कुरेर बस्छौ, तपाईहरू त्यहाँबाट छिर्नुहोस् अनि भित्र पूरै यौन बजार छ । केटीहरू त्यहीँ छन् । कुन मन पर्छ ? रोजेरभित्र जाने हो । यो पूरै रेड एरिया नै । फर्कने बेला हराउनुहोला मोबाइलमा जीपीएस हानेर यही आउनु, हामी कुरेर बस्ने कफी दोकानमा आउनुहोला ।’
हामीले ओके भन्यौं र सरकारी सरजी अनि म लाग्यौं यौन बजारको दर्शन गर्न । हामी पशुपतिनाथको मन्दिर गए जस्तै यहाँ मानिसहरूको भीड थियो । यौन बजारमा मानिसहरूले आफ्ना यौन चाहनालाई पूरा गर्न हिँडिरहेका थिए । महिला–पुरुष बराबरी हिँडिरहेका थिए । पुरुष यौनकर्मी पनि पाइन्छन् भन्ने सुनियो । दृश्य अवलोकनकै सन्दर्भ चलिरह्यो ।
अचानक सरजीले भन्नुभयो, ‘हेर्नु त सर खैरीनी क्या बबाल छ यार, कुरा गरौं कि कसो ?’
‘नो नो यार पहिले सबै घुमौं न, हामी बल्ल त आयौं नि पहिला यो पूरै बजार घुमौं । मलाई त लेख्नु पनि छ पछि यसका बारेमा । मलाई खासै त्यो ... रुचि छैन क्या ! तर ठिकै छ पहिला घुमौं न,’ मैले भने ।
‘हुँदैन यार पहिला यसो कुरा गरौं न, पछि त के हो के छिट्टै फर्किनुपर्छ, यहाँ कसैको भरोसा छैन, लुटपाट पनि हुनसक्छ,’ सरको धैर्यताको बाँध निकै कमजोर भइसकेको थियो ।
त्यहाँ लुटपाट हुने कुरा थिएन । प्रहरीहरू नै गाडी लिएर मजासँग ग्राहकको सुरक्षाका निम्ति बसिरहेका थिए । गाँजा फ्री भएर नै त होला युवायुवतीहरू गाँजाको तालमा लट्ठ थिए । नजिकै थिए संसारकै चर्चित क्यासिनो घरहरू । उता पनि मानिसहरूको उत्तिकै भीड थियो । कम्तिमा २० मिनेट जति हामी नेदरल्यान्डको यौन बजार घुम्यौं ।
मलाई अचम्म लाग्यो । समाजवादी देशहरू, मानवअधिकारको रक्षा भएका देशहरूमा पनि यौन भन्ने कुरा सामान्य कुरा रहेछ । अर्थात यौन त एउटा व्यापार रहेछ । जस्तो कि तरकारी, सागसब्जी बेचे जस्तै यौन बेचिने रहेछ । यो कुनै लुकीछिपी प्रहरी र सरकारको आँखा छलेर होइन कि सरकारलाई कर तिरेर लाइसेन्स लिएर प्रहरीको सुरक्षामा आफ्नो इच्छाका साथ युवतीहरू आफूलाई ग्राहकको पर्खाइमा राख्दा रहेछन् ।
मैले सरसर्ती नेपालका महिला अधिकारवादी नेताहरू सम्झें । उनीहरूको भाषण सम्झे । अनि यस्तो लाग्यो उनीहरूलाई यो दृश्य देख्दा कस्तो लाग्ला ? किनकि महिला र यौन यहाँ केवल वस्तु भएको थियो । महिला केवल बजारको उपभोग्य सामग्री जस्तो देखिन्थ्यो ।
यस्तो पनि हुने रहेछ उदेक लाग्यो । हुन त नेपालमा पनि यस्ता कामहरू नहुने होइनन् । तर खुला यौन बजारलाई कानूनले मान्यता दिएको छैन ।
हामी यौन बजारमै थियौं । सरजी निकै हतारको मुद्रामा देखिनुहुन्थ्यो । मैले भने, ‘स त नि सर अब तपाईंलाई कुन चै मनपर्छ । छिर्नुहोस्, जानुहोस्, काम तमाम सकेर आउनुहोस् ।’ उहाँले आफू खैरेनीबाहेक अरुको यौन ग्राहक नबन्ने कुरा पहिल्यै बताइसक्नुभएको थियो ।
किनकि त्यहाँ रसिया, ब्राजिल, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, मलेसिया लगायतका अनुहारका युवतीहरू पनि देखिन्थे । खैरेनीहरू पनि थिए । अर्थात् गोरा छाला भएका युवतीहरू पनि थिए ।
नभन्दै सरजीले त खैरेनी युवतीलाई गिद्धेनजर लगाइसक्नुभएको रहेछ । मलाई सोध्नुभयो, ‘यो केटी कस्तो छ ?’
‘बबाल छ यार,’ मैले भने ।
युवती सारै सुन्दर थिइन् । उनले ब्रा र पेन्टीबाहेक अरु लगाएकी थिइनन् । शरीरका अंगहरू निकै आकर्षक थिए । आँखाको नानी निलो रंगको जस्तो थियो । केश कर्ली गरेको थियो । उचाइ पनि थियो होला ६ फिट जति । कम्मर छिनेको स्लिम थियो । कुनै हलिउड चलचित्रको नायिकाभन्दा कम देखिन्नथिन् ।
हाम्रा सरजी पनि कम थिएनन्, युरो टन्नै बोकेका थिए । मान्छे होचा–होचा भए पनि निकै फुर्तिला थिए । हेर्दा हेर्दै उनी खैरेनीको अँगालोमा बेरिन पुगे ।
अब पालो थियो मेरो । जोखाना हेरिररेको थिए । मनमा लागेको थियो, साला जीवनमा पहिलो पटक यौन बजारमा आएको छस्, केही सामान खरिद गर । मनमनै लड़ाइँ शुरू भयो । तैले जसरी नेपालमा दोकानमा गएर दहीदूध किनिस्, यसरी नै सोच यहाँ । फरक केही होइन, केवल वस्तु र त्यसको मूल्य र महत्त्व मात्र फरक हो ।
सरजी खैरेनीको अँगालोमा गएको ५ मिनेट भइसकेको थियो । तर मैले निर्णय गर्न सकेको थिएन । अन्ततः मैले पनि निर्णय गर्नैपर्ने भयो ।
पशुपतिनाथ भगवान्सँग माफी माग्दै युक्रेनी जस्ती देखिने युवतीलाई मैले भने, ‘हाउ आर यू बेबी’ ।
उनी मुसुक्क मुस्कुराइन् र भनिन्, ‘आर यू इन भेकेसन ?’ किनकि उनलाई लागेको हुन सक्छ बिदा मनाउन आउनेहरू रमाइलोका लागि म कहाँ आउने गर्छन् । उनले त्यो भोगेको पनि हुन सक्छ । मैलै ‘एस, एस, एस भेकेसन’ भनिदिए ।
बेल्जियमबाट आउने बेला दाइले भन्नुभएको थियो, पैसाको ख्याल गर्नु धेरैमा सय युरोभन्दा नदिनु । तर उनको सुन्दरता हेर्दा सय युरो त के १ लाख युरो भए नि सबै छरपस्ट हुने गरी उनको शरीरभरि फ्याके पनि घाटा पर्ने थिएन ।
उनी पनि कुनै हलिउडको नायिकाभन्दा कमी थिइनन् । निकै सुन्दर थिइन् । सुन्दर मानिसहरू किन यस्तो काम गर्छन् यहाँ ? सायद सुन्दर भएकै कारण यौन बजारको वस्तु भएका त होलान् नि ! मनमा फेरी बहस चल्यो । उनका हातखुट्टाहरू प्लास्टिक सर्जरी गरिए जस्ता निकै सफा अनि मुलायम देखिन्थे ।
मलाई यौनसँग कुनै आशक्ति थिएन । तर यौन बजारको भित्रि कथा म देख्न चाहन्थे । म भित्र छिरे । अनि सोधे, ‘होयर आर यू फ्रम ?’ उनले भनिन्, ‘युक्रेन’ ।
यौन बजारको एक यौन व्यवसायी युवती भए पनि उनी सवालजवाफ गर्न निकै मन पराउने खालकी रहिछन् । सायद मेरो रुचि बुझेर पनि होला । गाँजाको अनि मदिराको तालमा धेरै युवाहरू त्यहाँ जाने रहेछन् । तर म साधारण कोट पाइन्ट लगाएर गएको थिए ।
‘युक्रेन ! ओ भेरी ब्यूटीफुल कन्ट्री,’ मैले भने ।
पक्कै पनि कसलाई आफ्नो देश मन पर्दैन होला र ? उनी मुसुक्क मुस्कुराइन् र भनिन्, ‘एस, रियल्ली ब्यूटीफुल माई युक्रेन ।’
‘लेट्स गो टु डील,’ उनले भनिन् । मैले कुरो बुझिनँ । ‘ह्वाट डु यू मिन,’ मैले भने । उनले भनिन्, ‘ईफ यू वान किस मि अन नेक यू ह्याब टु पे मि मोर । यु ह्यब टु ए मोर मनी ... एड फिप्टी युरो ओके ?’
उनले किन यसो भनेकी थिइन् भने केवल यौनसम्पर्क गर्नका लागी मात्रै १०० युरो रेट रहेको पहिल्यै भनेकी थिइन् र त्यो यौनसम्पर्कमा ‘किस’को मूल्य जोडिएको थिएन ।
अब उनले आफ्नो शरीरका सबै अंग, अंगको मूल्य तोक्न थालिन् । म उनको शरीरका अंगको मूल्य सुनेर बडो रोचक मुद्रामा चिटिक्क परेको सफा सानो सोफामा बसिरहेको थिए ।
उनले भन्दै गइन्, ‘ओके, इफ यू वाना किस मि अल लिप्स जस्ट टेन युरो ओके । बट ओन्ली २ मिनेट । नथिङ मोर देन ड्याट ।’ म खिस्स हाँसे ।
उनले आफ्नो ओठमा किस गर्नका लागि मूल्य तोकेकी थिइन् । त्यतिसम्म त ठीकै थियो । त्यो किसको अवधि पनि तोकेकी थिइन् जम्मा २ मिनेट । मैले मनमनै सोचे, ‘हेर त पैसा । यता पनि पैसा, उता पनि पैसा । पैसा नै पैसा । हैट ! शरीरका अंग अंगमा पैसा !’
अब आफ्ना शरीरका कुन–कुन अंगका मूल्य कति तोक्ने हुन् भनेर म डराइरहेको थिएँ । रामरामराम भन्दा पनि लाजको मर्दो ! सुन्दा पनि लाज मर्दो । उनको स्तन छोएको मात्रै बिस युरो । त्यो पनि दुवै हातले छुन नपाइने ।
ल भयो । यौन बजारको तृष्णा मेटियो । यो १०० युरो छ तिमी आफैं राख भनेर म हिँड्न लागेको थिएँ, अचानक ती युक्रेनी नानीले च्याप्प मेरो छाती समाइन् र भनिन्, ‘ओके जेन्टल म्यान, यू लुक भेरी इनोसेन्ट । डु ब्याट ओभर यू वान्ट, गिभ मि जस्ट टु हन्ड्रेट युरो । डिल फिनिस्ट इन प्याकेज ।’
अन्ततः उनको शरीरका सबै अंगलाई छुन सक्ने अनुमतिसहित मैले २०० युरो दिए । मैले झूटा बोल्दिनँ, उनको स्तन मैले छोएँ । त्यो कुनै आकर्षण भएर छोएको होइन कि उनको स्तन रियल हो कि प्लास्टिक हो भनेर मलाई जान्नु थियो । यसो अनुभव गर्दा रियल नै जस्तो लाग्यो ।
उनीप्रति मेरो कुनै आकर्षण थिएन । बजारको यौनसँग आकर्षण हुने पनि भएन । यसअघि यस्ता अनुभव पनि थिएन । केवल विश्वमा प्रख्यात यौन राजधानी कस्तो हुने रहेछ भन्ने मात्र जानु थियो ।
अनि उनले बिस्तारै आफ्ना हर्कतहरू देखाउन थालिन् । उनको हाउभाउ, प्रस्तुती कुनै पोर्न चलचित्रको प्रख्यात पोर्नस्टारको जस्तो थियो । मैले भने, ‘प्लिज स्टप ...’
मलाई अनेकौ रोगब्याधिसँग जुध्नु थिएन । थाहा थियो नाथे कण्डम फुट्न पनि सक्छ । जे पनि हुनसक्छ । ‘आई डन्ट वाना सेक्स विथ यू, आई जस्ट वान सी यू,’ मैले भने ।
उनले मेरो कुरा बुझिन् र कफी पिउँछौ त उसो भए भनेर सोधिन् । कफीको १ सुर्पीसँगै उनले भनिन्, ‘तिम्रो गर्लफ्रेन्ड त सारै भाग्यमानी रहेछिन् । मलाई पनि तिमी जस्तै ब्वाइफ्रेण्ड चाहिएको छ । तर के संसारमा अझै यस्ता केटाहरू छन् र ?’ उनले हरेश खाँदै भनिन्, ‘एभ्रीबडी चिटर ...’
एक यौनकर्मी युवती अब भने मसँग एक आम साधारण युवती जस्तै खुलेर बोल्न थालिन् । केही मिनेट अगाडिसम्म उनले मलाई आफ्ना ग्राहकको रुपमा मात्र सोचेकी थिइन् । भन्न थालिन्, ‘ब्रदर ... माई ब्वाइफ्रेन्ड लिभ मि एलोन, आई ह्याभ वान चाइल्ड ... डटर ... आई एम् बिलकंस् फ्रम रिच फेमिली । बट आई कान्ट गो ब्याक युक्रेन विथ चाइल्ड । आई केम हियर एट अ स्टुडेन्ट ।’
उनको कुरा मलाई यस्तो लाग्यो कि यो रमझम शहरभित्र पीडा नै पीडा लुकेको छ । मात्र हामी त्यसलाई बुझ्न सकिरहेका हुदैनौं । संसारका सबै यौनकर्मीहरू ईच्छाभन्दा पनि बाध्यताले यस्तो कर्ममा लाग्न बाध्य हुन्छन् जस्तो लाग्यो ।
तर उनलाई आफ्नो कामप्रति कुनै हिनताबोध थिएन । उनले भनेकी थिइन्, ‘इट्स जस्ट माई प्रोफेसन ।’
मैले सगरमाथाबारे बताएपछि उनले युक्रेनबारे बताइन् । युक्रेनका केटीहरू राम्रा हुने कुरा फेरि दोहोर्‍याइन् । संसारका धनीहरू बिहे गर्न युक्रेन जाने गरेको रहस्य उनले खुलाइन् ।
आफ्नो कर्मभूमि नेदरल्यान्डबारे पनि उनले आफूले जानेका कुरा शेयर गरिन् । आमस्टडम आफ्नो सौन्दर्यका लागि कम र सेक्स टुरिज्मका लागि ज्यादा प्रसिद्ध छ । उनले भनिन्, ‘यहाँको रेड लाइड डिस्ट्रिकमा निम्नदेखि उच्च क्लासका सेक्स वर्कस उपलब्ध हुन्छन् । यसका साथै यहाँ सेक्स शप, स्ट्रीप क्लब पनि उत्तिकै फेमश छन् । वेश्वावृत्ति कानूनी भएकाले यहाँ सुरक्षाको विशेष ख्याल राखिन्छ ।’
वेश्यालयलाई संसारको सबै देशले कानूनी मान्यता नदिए पनि संसारको पुरानो व्यवसाय पेशा ‘वर्ल्डस् वल्डेस्ट प्रोफेसन’को रुपमा अभ्यास भइरहेको उनको कथन थियो । कारण त्यहाँको लोकप्रिय सिनसिटी आमस्टडम संसारकै ठूलो यौन व्यवसायी शहरको रुपमा स्थापित भएको रहेछ । यौन व्यवसायीलाई कानूनी मान्यता पनि दिइएको छ र यसलाई नियमन पनि गरिएको रहेछ । आमस्टडमको ठूलो र लोकप्रिय जिल्ला हो, डि वालेन र यो ठाउँ अन्तर्राष्ट्रिय यौन व्यवसायको लागि प्रसिद्ध छ ।
नेदरल्यान्डको तलाउ किनारको एउटा रंगीचंगी कोठाभित्र युक्रेनी नानीको कुरा सुन्दासुन्दै १ घण्टा बितेको पनि पत्तै पाइएनछ । अलिक आत्मीयता बढेर होला बिदा हुने बेलामा उनले मेरो इमेल आईडी मागिन् ।
सरजी बाहिर चोकमा अगाडि नै पुगेर मलाई पर्खिएर बसेका रहेछन् । ‘कति समय लगाएको यार ? मलाई त आधा घण्टामै भयो त यार !’ सरजी मसँग रिसाउनुभयो । म खिस्स हाँसे ।
जीपीएसको सहारामा हामी पर्खिरहेका दाइहरू भएको कफीशपमा आयौं । गाडी चढ्यौं र बेल्जियम नै फिर्ता भयौं ।
अस्ति एउटा अपरिचित इमेल आईडीबाट इमेल आयो । लेखिएको थियो, ‘हे ब्रदर ! आई ह्याब केम युक्रेन । फलावर्स आर बलोमिङ अराउन्ड माई हाउस, आई थिंक यू आर ड्याट वान फ्लावर ...’
मैले उनलाई के भनेर इमेलको जवाफ फर्काउने होला, केही सोच्न सकिरहेको छैन ।
कोरोना कहरमा फोटो पत्रकारमाथि ज्यादती किन ?
समृद्ध नेपालको नारामा बालबालिकाको स्थान कहाँ ?
'आई लभ यू' ज्योती मगर !
इथियोपियाको ताजा कायापलटको कथा : एउटै नेतृत्वले ...
रानीपोखरीमा ४१ तीर्थका जल
महामारीको मौका छोपेर खोलामा डोजर
'विकासका निम्ति रानीपोखरीको पुनर्निर्माण महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा'